Ụbọchị My Pet » Olee otú Bịakwute Women Ọ bụrụ na Ị na-eme ihere?
emelitere ikpeazụ: Jan. 18 2021 | 2 min agụ
Ị na-a na-eme ihere Ihọd na a drawback gị emeela ka ị na-anọgide na-alụbeghị di a niile afọ.
Ndi n'elu na-akọwa ọnọdụ gị? Ị na-achọ mfe na-emezu ihe e kpere, ma dị irè ụzọ tufuo nke nsogbu? Ọ bụrụ na ee, nneme n'okpuru kwesịrị inyere gị aka.
Iji merie ihere, ị ga-enwe okwukwe na gị na a njedebe nke ọtụtụ ihe pụrụ inyere gị aka imeta na okwukwe. Gụọ na mara ihe kpọmkwem ị ga-eme.
Lee obi ike
Ọ bụ eziokwu na onye na-enweghị ike ịgbanwe ya ma ọ bụ ọdịdị ahụ ya. N'ihi ya, a onye pụrụ ime ihe ọ bụla banyere otú mara mma enye ese, ma ọ pụrụ n'ezie ime ka ihe ụfọdụ anya ọzọ nwee obi ike.
Ọ bụ ihe kwere nghọta na ị na-gwụsịrị ịgakwuru nwanyị ọ bụla n'ihi na gị ihere, Ma, otu ihe ị ga-aghọta bụ na ọ dịghị onye ọzọ ndị ọzọ karịa gị (ma eleghị anya a mmadụ ole na ole nnọọ unu nso) maara na ị na-eme ihere.
Ya mere, ị nwere ike mfe agbalị mingle na ndị na-enweghị ka ha na-aghọta na ị bụ otu n'ime ndị na debeere (na-agụ na-eme ihere) ndị mmadụ ndị na-anọkarị n'ebe ụmụ agbọghọ. Nke a ga-eme ka ọ dịrị ya mfe ka ị zoo bashfulness; mgbe ị na jikwaa ịrụ a cover-ọma, ị ga-akpaghị aka na-amalite na-eche ọzọ nwee obi ike.
Iji anya obi ike ị ga-elekwasị anya a bit na ụzọ i si eji ejiji. Zere yi uwe na-agaghị ekwe ka ị si dị ìgwè mmadụ ahụ. Emela, ị ga-adịghị mkpa na-eyi ndị na fluorescent trouzas na-egbuke egbuke acha uwe elu na-hụrụ na ìgwè mmadụ. Dị nnọọ họrọ gị uwe a bit amamihe; ma ọ bụrụ na ị na-eyi uwe ndị na-anya ọma na ị, ị ga-akpaghị aka jidere uche nke ndị inyom gburugburu gị.
Nwere ezi uche Aims
Ị na-eme atụmatụ iji woo ndị kasị ewu ewu na ọtụtụ nwa agbọghọ mara mma gburugburu? Dị ka a na-eme ihere nwoke, ị kwesịrị ị na-ezere ịnwa na.
Ọ bụ eziokwu na gị na ihere ga-belata budata mgbe ị na-amalite ịchọ ihe obi ike, ma nke ahụ apụtaghị na ị na-smart iji rata kacha ekpo ọkụ ugbu girl gburugburu.
Nwa agbọghọ ọ bụla bụ onye na-ama na-ewu ewu na a maara dị ka ndị kasị mma onye ya na otu bụ na-emekarị ukwuu obi ike. The obi ike na ị zukọtara nnọọ na nso nso ga-ezu iji gakwuru ndị dị otú ahụ a girl; ya obi ike ga-agbaji gị na oge ị ga-agakwuru ya.
Ya mere, nzube gị ga-achọta a girl na suut gị larịị; mgbe zere na-eru nso inyom na-amaja gị.
Unu ihere pụọ n'ebe na-eme ka anya na kọntaktị
Mgbe ị na-akpatre ịgakwuru onye, adịghị ezere si na-eme ka anya na kọntaktị. Women ina wooed mfe mgbe nwoke anya n'ime ha anya enweghị ihe ọ bụla mgbochi.
Nke a bụ, Otú ọ dị, ịbụ ihe kasị sie ike ọrụ a na-eme ihere onye pụrụ mgbe a ga-jụrụ ime; ma, ozugbo mbụ egbochi i.e. na-eru nso nwanyị a na-gafere, ị ga-etinye mgbalị kasị mma i ịgafe ọzọ.
Ime anya dị nnọọ mfe karịa ihe ị na-n'ezie anya isi. Mgbe na-eme anya, na-agbalị ịnọgide na-enwe ya maka a nkeji ole na ole; gị mbụ nervousness ga--arahụ.
The n'elu Atụmatụ kwesịrị inyere gị aka pụta nke shei nke ime ihere. Ndị ọzọ karịa na-esonụ ndị a Atụmatụ, ị nwekwara ike na-arụ ọrụ rụọ ọrụ gị mkparịta ụka nkà na-asa nke ịkpa ọchị.